ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 13 John
13:1 Phambi kokuba imini komthendeleko wepasika, UYesu wayesazi ukuba lixa wayesondela xa iza kudlula kwakhe kweli hlabathi, aye kuYise. Yaye ekubeni wayesoloko ebathandile abakhe abasehlabathini, wabathanda kwada kwasekupheleni.
13:2 Kwaye xa isidlo ukuba kwenzeke, xa uMtyholi selekufakile entliziyweni kaYuda Sikariyoti, unyana kaSimon, ukuba amkhaphele,
13:3 Ukwazi ukuba uYise uzinikele zonke izinto ezandleni zakhe, nokuba waphuma kuThixo, esiya kuThixo,
13:4 Wavuka esidlweni, waza wabeka bucala iingubo zakhe, yaye xa ifumene itawuli, wasisonga ngeenxa zonke kuye.
13:5 Wabeka amanzi kwisitya nzulu, waza waqala ukuhlamba iinyawo zabafundi, nokuzisula ngetawuli athe eyayibhijelwa.
13:6 Kwaye ngoko weza kuSimon Petros. Wathi ke uPetros kuye, "Nkosi, ukuba zihlanjwe nguwe na iinyawo zam?"
13:7 UYesu waphendula wathi kuye: "Oko ndikwenzayo, wena ngoku ukuqonda. Ke nina niya kuqonda oko emva koko. "
13:8 Ke uPetros wathi kuye, "Akusayi kuzihlamba iinyawo zam!"Waphendula uYesu wathi kuye, "Ukuba andithanga ndikuhlambe, uya kuba nendawo kunye nam. "
13:9 USimon Petros wathi kuye, "Emva koko iNkosi, izinyawo kuphela, kodwa izandla zam nentloko yam!"
13:10 UYesu wathi kuye: "Lowo uhlanjiweyo Okudingayo ahlambe kuphela iinyawo zakhe, yena ke uya kuhlambuluka ngokupheleleyo. Kwaye Nina nisenihlambulukile, kodwa hayi bonke. "
13:11 Kuba ebemazi ngowuphi obeya kumngcatsha. Ngesi sizathu, uthe, "Uze nonke abahlambulukileyo."
13:12 Kwaye, emva xeshikweni ebezihlambile iinyawo zabo, wafumana nezambatho zakhe, xa yena wahlala phantsi etafileni kwakhona, Wathi yena kubo: "Ngaba uyayazi into endiyenzileyo kuwe?
13:13 Nina ukundibiza nithi ndinguMfundisi, nithi ndiyiNkosi, kwaye utyaphile ukutsho: kuba kunjalo.
13:14 ngoko ke, ukuba ndi, EndiyiNkosi noMfundisi wenu, ukuba ndizihlambile iinyawo zenu, nani nifanele ukuhlambana iinyawo omnye komnye.
13:15 Kuba ndininike umzekelo, ukuze kanye njengoko ndenze ngako kuwe, ngokunjalo ufanele uyenze.
13:16 Amen, amen, Ndithi kuwe, lo mkhonzi umkhulu kunenkosi yakhe, yaye lo mpostile umkhulu kunalowo umthumileyo.
13:17 Ukuba uqonde le, Ziya kusikelelelwa kuwe ukuba uya kuyenza.
13:18 Mna wayengathethi nonke. Ndiyabazi abo mna ndibanyulileyo. Kodwa ke, ukuze isibhalo sizaliseke, 'Lowo udla isonka nam uya kuphakamisa isithende sayo.'
13:19 Ke mna ndithi kuni ngoku, ngaphambi kokuba kwenzeke, ukuze, xa kuthe kwenzeka, ukuze nikholwe ukuba ndinguye.
13:20 Amen, amen, Ndithi kuwe, nalowo wamkela nabani na endithe ndamthuma, wamkela mna. Yaye nabani na owamkela mna, , wamkela lowo wandithumayo. "
13:21 Ezithethile uYesu ezi zinto, wakhathazeka emoyeni. Waza wanikela ubungqina ngokuthi: "Amen, amen, Ndithi kuwe, omnye phakathi kwenu uya kundingcatsha. "
13:22 ngoko ke, abafundi ebasingasingile omnye komnye, baqiniseke ukuba uthetha bani na.
13:23 Kwaye bekwayame esifubeni sikaYesu omnye wabafundi bakhe, lowo obethandwa nguYesu.
13:24 ngoko ke, USimon Petros wanqwala kuye waza wathi kuye, "Ngubani na ukuba uthetha?"
13:25 Kwaye, bekwayame esifubeni sikaYesu, Wathi yena kuye, "Nkosi, Ngubani?"
13:26 uYesu wamphendula, "Yiyo Ngulowo ndiya ukwandisa isonka nkxu." Waza akuba nkxu isonka, wayinika uYudas Skariyoti, unyana kaSimon.
13:27 Yaye emva kweqhekeza, USathana wangena kuye. Wathi kuye uYesu, "Uza kwenza, kwenze kamsinya. "
13:28 Ngoku namnye kwabo ehleli esithebeni, ubesazi ukuba ebekuthethile oku kuye.
13:29 Kuba abathile babecinga ukuba, ekubeni ingxowa ibikuYuda wabamba sipaji, ukuba uYesu wayethe kuye, "Thenga ezo zinto ezo ezifunekayo sithi imini umthendeleko,"Okanye ukuba amnikele into amahlwempu.
13:30 ngoko ke, nalamkelayo nje iqhekeza, waphuma ngoko nangoko. Kwaye ke kusebusuku.
13:31 ke, akuba ephumile, uYesu wathi: "Ngoku ke, uNyana woMntu uzukisiwe, uThixo uzukisiwe kuye.
13:32 Ukuba ke uThixo uzukisiwe kuye, ngoko noThixo uya kumzukisa kuye ngokwakhe, yaye uya kumzukisa kuye ngaphandle kokulibazisa.
13:33 oonyana Little, ixesha elifutshane, Ndinawe mna. Niya kundifuna, kwaye njengoko ndathi kumaYuda, 'Apho ndiya khona mna, aninako ukuya,'Ukuze Nam ke, ndithi kuwe ngoku.
13:34 Ndiniwisela umthetho omtsha: Sithandane. Kanye njengoko ndinithandileyo nina, ukuze nani nithandane.
13:35 ngale, bonke bazi ukuba ningabafundi bam: ukuba uya kuba nothando omnye komnye. "
13:36 USimon Petros wathi kuye, "Nkosi, uyaphi?"UYesu waphendula: "Apho ndiya khona mna, wena ukuba ndingabi nako ukukulandela ngoku. Ke wena uya kulandela kamva. "
13:37 Ke uPetros wathi kuye: "Kutheni mna akukwazi ukukulandela ngoku? Ndiya kuwuncamela wena umphefumlo wam!"
13:38 Waphendula uYesu wathi kuye: "Uya walala phantsi mna na umphefumlo wakho? Amen, amen, Ndithi kuwe, Ayisayi kulila, inkuku, ungekakhanyeli kathathu. "